Kutheni inja iphupha ngokulungileyo, emnyama, efile. Ukutolika kwephupha kwenja yokukhwaza. Ukuchazwa ngeengqondo zezinja.
Kuthekani ukuba inja iphupha? Yintoni ongayilindela ephupheni ngeenja?
Umfanekiso wenja kumaphupha uqhelekileyo. Oku akumangalisi, kuba abaninzi bethu bahlala ekhaya. Siyabathanda, siwaqwalasela amalungu omndeni, sithetha, siyahamba. Ngoko, ukuqonda kwethu ngokuqhelekileyo kusetyenziswa lo mfanekiso ukusixwayisa.
Inja ephupheni, njengokuchazwa kwephupha nenja, ingahluka. Konke kuya kuxhomekeka kwiinkcukacha. Ngokuchasene neenkolelo eziqhelekileyo, kungekhona inja ephupheni kuthetha umhlobo okanye into entle.
Kutheni inja ifika ephupheni ngamaphupha ahlukeneyo
ukuba kwakuyiphupha ukuba izinja zalunywa - luphawu lokuba kwikamva kuya kubakho ukuxabana nomntu osondeleyo. Xa beliluma ngakumbi, kunzima ukulwa. Kungcono ukulungiselela oku kwangaphambili;
Ukuba inja ikugxotha ephupheni, lindela ingxaki kwi-front front. Unokuxabana nomthandane wakho, okanye awuyi kubuyiselwa ngumntu oye wenza izicwangciso;
ukuba uphupha ukukhwaza inja, kunokwenzeka ukuba uya kuthetha ngokungafanelekanga phakathi kwabahlobo okanye obaziyo. Oku kungenziwa ngumntu osondeleyo kuwe;
ukuba inja emhlophe iphupha, ungalindela impumelelo nokuchuma kwisekusondeleko, kokubili emsebenzini nasemndenini;
ukuba inja emnyama iphupha, umfana wakho unokutshintsha okanye uzimisele ukwenza;
ukuba ephupheni inja ihlutha iingubo zibonakaliso oluqinisekileyo lokuba omnye ojikelezayo uyilungiselela into embi kuwe. Kubalulekile ukujonga kwisangqa sakho soqhagamshelwano kunye nokunciphisa umnxibelelwano nabantu ongaziqinisekanga;
Ndabona inja ilwa ngaphandle kwegazi ephupheni - unokubona ubungqina beentlanga. Ukungenelela akufanelekanga, kuya kuza kuwe ngasecaleni;
Bambona inja elwa negazi ephupheni, kuthetha ukuba izalamane ezisondeleyo okanye abahlobo abalungileyo bayafunga. Kungcono ukungenelela apha. Ukuba uhlala eceleni, imiphumo ingaba lusizi kuwe;
ukuba inja ikuhlasele ephupheni - lindela iindwendwe ozibonanga ixesha elide. Abafunda nabo, okanye afunda nabo, ababengumhlobo okanye abasebenzisana nabo;
Ukuba uthe wabona inja enkulu ephupheni ngumqondiso omhle, oko kuthetha ukuba kungekudala uza kudibana nomhlobo othembekileyo okanye othembekileyo okanye ufumane inkxaso evela kumntu ongakhange adibane naye ngaphambili;
ukuba iphupha elibi okanye elinobudlova, lithetha ukuxabana. Ukugqithisa okunjalo kubonakalisiwe, ngokulandelanayo, kunye nokuxabana kuya kubaluleke kakhulu;
inja ede isweleka ingumqondiso ombi, oko kunokuthetha ukugula komntu othandekayo, kunye nokuxabana nezihlobo okanye abasebenzisana nabo;
amaphupha eenja ezibuleweyo okanye abagulayo-uphawu olubi, ngakumbi kubarhwebi. Kukho ilahleko ukusuka kwiprojekthi ekhoyo. Kwabanye abantu, oku kuthetha ukungasebenzi kakubi ekhaya, ukungaqondi kakuhle ngabazali, abantwana okanye umyeni.
xa inja yokuthetha inja, ithetha ukuba kubalulekile ukukhusela iinkampani zabantu abangaziwayo, kuba unokuba khona. Gwema indawo ezingabonakaliyo ngokuhlwa. Ukuba indlela yakho iya ekhaya kwindawo enjalo - yitshintshe, kwaye ukuba kunokwenzeka uhlale ekhaya.
Musa ukukhohliswa ukuba inja iphupha lakho. Oku akusoloko kulungile. Umfanekiso womhlobo omhle womntu, kokubili kwihlabathi lenene nakwihlabathi lamaphupha, uhlala ezama ukukunceda kwaye akuxwayise ngeengxaki ezisondeleyo okanye iziganeko ezivuya.
Ngamana unokuba nethamsanqa kwaye unamaphupha amnandi azaliswe ngampawu ezintle.
Idiza lokuwa liphupha ntoni?
Ukuchazwa kokulala: ukuzala intombazana
I-jam egcinwe kwiintonga
Ukulala ngaphambi kokuba anqobe
Ioli ye-Castor kwiziqholo
Siphucula izikhundla zesondo zakudala
Inkambo ngobume bemvelo: iphepha lodonga olupakanyisiweyo lwangaphakathi
Indlela yokufunda inkondlo enomntwana wesikolo sokufunda esikolweni
I-horoscope echanekileyo kwiveki ka-Oktobha 23-29 kuzo zonke iimpawu ze-zodiac